Maresaka » Ny Razana sa i Jesosy Kristy?
Aoka isika Kristianina tsy ho fitahin'ny devoly sy ny fanahy ratsy toy izany. Andriamanitra velona no tompointsika, dia tsy iza fa ilay omaly sy anio ary mandrakizay. "Nahoana no ato amin'ny maty no itadiavanareo ny velona" hoy ny Soratra Masina ao amin'ny Lioka 24:5. Tsy ny razana na any am-pasana sanatria no azahoantsika fiainana sy fitahiana ary famelan-keloka fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany.
Ho Azy irery ihany anie ny voninahitra ary ho aminao ny Fiadanany!